के अपसाइक्लि .्ग छ र यसले प्रकृतिलाई कसरी मद्दत गर्दछ बेजिया
के कडा छ?
Susana Garcia | 17/04/2021 10:00 | जीवन शैली
हामी अधिक र अधिक फोहोर पैदा गर्दैछौं त्यसैले वातावरणलाई असर नपार्न यो धेरै नै गाह्रो छ। हामीले बुझेका छौं कि महान उपभोक्तावादले हामीलाई प्रत्येक वर्ष धेरै फोहोर उत्पन्न गराउँछ। तसर्थ, फोहोरको यो बृद्धिलाई कम गर्नका लागि रिसाइक्लिaमहत्वपूर्ण बिन्दु भएको छ। को अपसाइक्लि an एक आदर्श प्रवृत्ति हो जुन रिसाइक्लि onमा केन्द्रित छ र तपाईको पहिले नै भएको सुधार गर्न।
El अपसाइक्लि .लाई अपसाइक्लि। पनि भनिन्छ। यो शब्दले हामीलाई भन्दछ कि रिसाइक्लि creative रचनात्मक रूपमा केहि महत्त्वपूर्ण सिर्जना गर्न प्रयोग गरिएको थियो, जुन हामीसँग पहिले भन्दा बढी मूल्यको थियो, त्यसैले यस शब्दलाई थप गरियो। निस्सन्देह यो रिसाइक्लि ofको विचारको साथ धेरै मूल्य उत्पन्न गर्न एक उत्तम विचार हो र धेरैले यो लाभदायक हो भनेर पनि देख्छन्।
1 अपसाइक्लि Where कहाँबाट आउँछ?
2 फेसनमा upcycling
3 कला वा सजावटमा साइकलिंग
अपसाइक्लि Where कहाँबाट आउँछ?
अपसाइक्लि a्ग एक शब्द हो जुन नयाँ छैन, किनकि यो नब्बेको दशकमा देखा पर्‍यो। तर यो नयाँ शताब्दीसम्म यो अवधिले महत्त्व पाउने छैन। नब्बेको दशकमा वातावरणीय प्रभाव त्यति महत्वपूर्ण देखिएन तर अब हामी उपभोक्तावाद र जीवनस्तरको समस्याहरूबारे सजग छौं जुन छोटो र लामो अवधिमा हामी प्रकृतिमा सृजना गर्दछौं। यसैले त्यहाँ धेरै विचारहरू छन् जुन जीवनको नयाँ तरिकाहरूमा थपिदै छ जुन अपसाइक्लि।, जुन प्रयोगको बारेमा हो सामग्री हामी पहिले नै केहि नयाँ र मूल्यवान बनाउन को लागी छ, रचनात्मक केहि जुन फेरि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक शब्द हो जुन फेसनको कला र कलामा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ।
त्यहाँ धेरै फर्महरू छन् जुन यो नयाँ विचारमा स्थायी रूपमा सामेल भइसकेको छ। धेरै फर्महरूमा लेबलहरू देख्न सजिलो छ जसले हामीलाई भन्दछ कि उनीहरूको कपडा अन्य पुन: प्रयोग गरिएको कपडाबाट वा अन्य सामग्रीहरू जस्तै गिलास वा प्लास्टिक सामग्रीहरूबाट सिर्जना गरिएको हो। यसले हामीलाई देखाउँछ कि हामी केवल फेसन किन्दै छैनौं, तर हामी त्यस्तो लुगा किन्दैछौं जुन सामग्रीबाट आउँदछ जुन पुनः प्रयोग गरिएको नयाँ केहि मूल्यवान छ, जुन उनीहरूलाई फेरि उपयोगी बनाउँदछ। फेसन मा विचार प्रवेश गरेको छ र त्यहाँ धेरै व्यावसायिक फर्महरू छन् जस्तै H&M वा Zara जसले यस प्रकारको कपडा समावेश गर्दछ। संकेतहरू हेर्नुहोस् र तपाईं देख्नुहुनेछ कि धेरै पुनः प्रयोग गरिएको सामग्रीका साथ बनेको छ, त्यसैले तपाईंले थाहा पाउनुहुनेछ कि वातावरणको हेरचाह गरिरहनु भएको छ जुन तपाईं नयाँ फेसनको आनन्द लिनुहुन्छ।
कला वा सजावटमा साइकलिंग
अर्को क्षेत्र जुन हामी यो शब्द फेला पार्न सक्छौं त्यो कला हो। कला को दुनिया चीज बनाउन को लागी रचनात्मक नस प्रयोग गरीएको छ लामो पहिले नै अवस्थित सामग्रीको साथ नयाँ। आज यसको नाम लिने शब्द छ र अधिक भन्दा धेरै कलाकारहरूले टुक्राहरू र सामग्रीमा नयाँ जीवन दिने निर्णय गर्दै छन् जुन अरू कसैले फ्याँक्नेछ। यी सामग्रीहरूलाई राम्रो उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने अर्को तरिका हो, तिनीहरूलाई प्रदूषणबाट जोगाउन।
सजावट को रूप मा, तपाईं पनि यो शब्द को लागी केहि विचारहरु पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ बत्तीहरू क्रिस्टल द्वारा बनाइएको वा रिसाइक्ड धातुहरू र कपडा पनिफेसनमा देखिएझैं कपडाहरू टाढा भएका पुराना कपडाहरूबाट पुन: साइकल गर्न सकिन्छ। यस तरीकाले हामीसँग एउटा घर हुनेछ र रिसाइक्लि many्ग धेरै तरिकामा प्रस्तुत हुनेछ। कला वा सजावट र फेसनको पनि मजा लिदै हामी वातावरणलाई उही समयमा मद्दत गर्न सक्दछौं र यस प्रकारको जागरूकता आज चाहिने कुरा हो।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » जीवन शैली » के कडा छ?
तालिम पछि के गर्ने
चक पेन्टका लागि सबै कुञ्जीहरू